Olona telo voasambotra teny Mahitsy : vola sandoka saika hanaovana “versement” | NewsMada
Olona telo voasambotra teny Mahitsy : vola sandoka saika hanaovana “versement”
Ravan’ny zandary avy ao amin’ny borigadin’i Mahitsy ny tambajotran-jiolahy nikasa hanaparitaka vola sandoka amin’iny faritra iny. Tratra tany amin’izy ireo ny vola sandoka saika harotsaka tao amin’ny orinasa iray eny en-toerana…
Nidoboka eny amin’ny fonjan’Antanimora ireo olona telo voarohirohy ho tompon’antoka tamin’ny fanapariahana vola sandoka teny Mahitsy. Saron’ny zandary avy ao amin’ny borigadin’i Mahitsy ry zalahy ireto. Nahazo loharanom-baovao mialoha ny zandary fa misy andian’olona manaparitaka vola sandoka eny Mahitsy. Niroso tamin’ny fanadihadiana ny zandary ka lehilahy iray nahatrarana vola sandoka nandritra ny fisavana nataon’ny zandary. Saika hanao “versement” tao amin’ny orinasa “micro-finance” iray eny an-toerana ity lehilahy ity. Tsikaritra nandritra ny fizahana niarahan’ireo mpiasa tao amin’ny orinasa sy ny zandary fa nahitana vola 10 000 Ar sandoka miisa sivy niaraka tamin’ireo vola saika harotsany tao amin’ny kaontiny. Nosamborina avy hatrany izy ka nambarany nandritra ny famotoran’ny zandary fa hoe ny rafozany no nahazoany ireo vola ireo. Rehefa nofotorana indray ity farany dia nilaza fa azony tamin’ny mpivaro-kena iray ao Mahitsy ireo vola ireo. Nosamborina ilay mpivaro-kena, saingy nandà fa tsy mahalala na inona na inona ny amin’izany raharaha izany.
Tratran’ny zandary sy ny fokonolona teo am-pangalarana moto scooter iray tao Ambohimandray Mahitsy, ny faran’ny herinandro teo koa ny jiolahy iray. Tokantrano iray no niharan’ny fanafihan-jiolahy, saingy afaka nampandre ny zandary ny fianakaviana ka noraisim-potsiny teo am-panosehana ity moto halatra ity ilay mpangalatra.